✍️ लक्ष्मी लिम्बु(कोइराला)
बिराटनगर : सरकार को पावर चाहिने काम मा भन्दा नचा’हिने काम मा बडि देखियेको पाइयो । यो अवस्थामा सरकार लागि पर्नु पर्ने हो जनताको लागि तर बि’डम्बना ठिक यसको उल्टो म’हशुस गरिरहेका छन् नेपालि जनता ले ।
कहिले व’रिष्ठ चि’कित्सक माथि आफ्नो पावर देखाइरहेका छन्,कहिले राहत बाड्ने माथि पावर देखाइरहेका छन् । आम नेपालि जनता त्यसै पनि पि’डित छन् यो माहामा’रि अनि ल’कडाउन बाट उ’ब्जियेका कठि’नाइ हरु बाट”
कति का’रुणिक अनि मा’र्मिक भिडियो फोटोहरु सामाजिक सन्जा’ल मा हामि दिनहु देख्छौ जुन हेरेर हाम्रो आ’शु थामि’न्दैन तर सरकार तिम्रो मन कति क’ठोर रैछ भन्ने कुरा भरखरै को घटना बाट पनि अनु’मान लाउनु सकिन्छ ।
ग्यानेन्द्र शाहिको रा’हत बि’तरण जुन तरिकाले सरकारले रोक्यो साच्चिनै नि’न्दनिय छ,मान्छेहरु भो’कै छन् दिनहु ज्या’ला मजदु’रि गरेर खाइरहरका हरु को हा’लत के होला यो समयमा !
कतै सुत्केरि महिलाहरु कतै कलिला बालबालिका हरु भो’कभो’कै बसिरहेका छन्। यिनिहरु लाई खु’वाउन खोज्नु के पाप हो सरकार? के ग’ल्ति भयो शाहि बाट? किन यस्तो रोष? राम्रो तरिकाले सावधानि पु’र्बक राहत बा’ड्नत पाउनुपर्ने हैन र? यदि हैन भने सरकार ले सबैलाइ पुग्ने गरि रा’हत बाडोस । प्र’साद जस्तो बा’ड्ने अनि कागज पत्र मात्र देखायेर मात्र बाड्ने ।
समाजसेवि हरु ले कागज पत्रै नहेरि भोकायेको हरु लाई खाना दिइराखेको छ अब यस मा किन सरकार को आप’ति? सिमित लाई हैन सबै गरिब दुखि लाई राहत बाड हैन भने समाजसेवि हरु को काम मा यसरि भाजो हाल्ने काम नगर ।
अ’तिचार नै गर्नु लाग्यौ,अब यो दुइ तिहाइ को सरकार को मिति पनि चाडै सकिनेछ याद गर । आफ्नो देश अनि आफ्नो जनता लाई स’र्वोपरि ठाने’र काम गर्ने गर अनि जनता ले पनि हाइ हाइ गर्नेछन् । जनतालाई भो’कभो’कै राखेर आफु कसरि टन्न खा’नु सक्नु? जनतालाई ना’ङ्गै राखेर आफु कसरि सु’किलो भयेर हिन्नु सक्नु ?
एउटा मा’नबता को नाताले पनि परेकोलाई गर्ने हो। तर यो भनेको त सरकार को जिम्मे’वारि हो कि देश का सबै जनताहरु भो’का नहुन् ना’ङ्गा नहुन् भनेर लागि पर्ने हो कि न’चाहिने काम हरु मा आफ्नो पावर देखाउदै बस्ने हो ?
लक्ष्मी लिम्बु(कोइराला) :- यस्तै यस्तै ताजा खबर समाचार र लेखहरु पढ्नको लागि Point Nepal लाई लाइक फलो गर्नुहोस् ।